विक्रम बरालकी प्रेमिकाको यस्तो पीडा :बाबाले छोडेर जानु भो, दाई बित्नु भयो ! – Rastriyapatrika
विक्रम बरालकी प्रेमिकाको यस्तो पीडा :बाबाले छोडेर जानु भो, दाई बित्नु भयो !
काठमाडौं, ८ पुष । नेपाल आइडलको सिजन २ मा फस्ट रनरअप बनेका विक्रम बराल रिलेशनसिपमा छन् भन्ने कुरा कतिपय दर्शकलाई थाहा नहुन सक्छ । उनी पोखराकै अनु गहतराजसंग तिन वर्षदेखि रिलेशनसिपमा छन् । विक्रम वराललाई नेपाल आइडल सिजन २ को विजेताका रुपमा हेरिएको थियो । तर उनी फस्ट रनरअप भए । उनी विजेता हुन नसक्नुका पछाडी के कारण हुन सक्ला भनेर उनको प्रेमिका अनुले केही यस्ता कारण कारण खोतलेकी छन् ।
नेपाल आइडलको प्रस्तुतीका क्रममा उनले स्टेजमा रक गित धेरै गाए । अनुलाई लाग्छ ६० प्रतिशत नेपालीहरुले लोक र आधुनिक गीत मन पराउँछन् । आफुले मनपराएको गीत जब कुनै कलाकारले गाउँछ भने पक्कै पनि त्यो गायक दर्शक श्रोतालाई मन पर्छ । रवि ओडले लोक र आधुनिक गीत गाएर दर्शकलाई समेत नचाए । उठेर बसेर आफै नाच्दै गर्दा माहोल नै निकै रमाइलो भयो ।
तर विक्रमका गीत युवा पुस्ताले मात्र मन पराउने खालको भएका कारण धेरै भोट नआएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘मैले पनि युट्युवहरु हेरिरहेको हुन्थें उनले भनिन् विक्रमले गाएको गीतमा कति पयले यस्तो पनि के गीत गाएको चिच्याएको मात्र छ भनेर कमेन्ट लेखेको हुन्थ्यो ।’ यस्तो देख्दा उनलाई लाग्थ्यो नेपाली सांगितीक क्षेत्रको विकासका लागि अझै केही समय पर्खनुपर्छ । उनले आफुहरुको रिलेशनसिपका बारेमा पनि धेरै कुरा खुलाएकी छन् । विक्रमको ब्यवहार र बानीका बारेमा उनले दर्शकलाई थाहा नभएका धेरै कुराहरु बताएकी छन् । बाँकी भिडियोबाट